Transitions DJ, သင့် Mac အတွက်လိုအပ်သည့်အသံလုပ်ငန်းသုံး (အခမဲ့) | ငါက Mac ပါ
Transitions DJ၊ Mac အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအယ်ဒီတာနှင့်သင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သော DJs အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု
တေးဂီတသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားအရာများစွာတွင်မိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေနိုင်ရုံသာမကပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်အသံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင်တည်းဖြတ်ရန်စဉ်းစားမိပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးလိုသည့်အရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အခုတော့မှန်ကန်သောကိရိယာများမပါပဲ၊ ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဤသည်မလွယ်ကူပါ ဤနေရာတွင် Mac အတွက်ယာယီအခမဲ့ရနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သော Transitions DJ ကိုသင်ပြတော့မည် App Store မှတဆင့် Logic Pro ဆီသို့အလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သော Apple ၏ကိုယ်ပိုင် GarageBand နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်အချို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်သင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ဂီတဖန်တီးမှုကိုအပြည့်အဝတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပေးမည့် Transitions DJ ဖြစ်သည်
ငါတို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Transitions DJ ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာသင်အားသာချက်ယူနိုင်သည် မည်သည့်သီချင်းသို့မဟုတ်အသံကိုမဆိုကျွမ်းကျင်စွာတည်းဖြတ်နိုင်သည်နှင့်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်ပါသည် DJ တစ်ခုအနေနဲ့သုံးပါ၊ ၎င်း၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်လည်းအချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသံဖိုင်များနှင့် voila များသာလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ Mac ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခုလုံးရောနှောတူသောမည်သည့်အချိန်။
ထို့အပြင် ၄ င်း၏လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းသည်အခြားအလားတူ application များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖိုင်များကို extract လုပ်ခြင်းအတွက်လည်းအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပ drive တစ်ခုမှဖြစ်စေကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖိုင်များတင်ခြင်းအပြင်၎င်းသည် ဒါ့အပြင် သင်၏ iTunes စာကြည့်တိုက်နှင့် SoundCloud အပါအ ၀ င်အခြားအပလီကေးရှင်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်.
အထူးသဖြင့် ဒါက Transitions DJ ကမင်းကိုခွင့်ပြုသမျှပဲ၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တရားဝင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်မှာ -
အသိဉာဏ် BPM ထောက်လှမ်း
3-band EQ ကိုရွေးချယ်သောခလုတ်များနှင့်ပိတ်ထားသည်
ရစ်သမ်များ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်စာပိုဒ်တိုများ (အခန်းငယ်၊ သံပြိုင်စသည်) အတွက်မှတ်ချက်များ။
သင်တို့မြင်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသော application ဖြစ်သည်MacOS Mojave တွင်ရှိနေသောအမှောင်စနစ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲသင်သုံးနိုင်လျှင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆခဲ့သည့်အတိုင်းဤနည်းဖြင့်သင့်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကပုံမှန်ဈေးနှုန်းသည်များသောအားဖြင့်ယူရို ၂၀ ခန့်ရှိသည်ဟုမှန်သော်လည်း၊ ယာယီအခမဲ့ Mac App Store မှတဆင့်အခမဲ့ရယူနိုင်သောကြောင့်သင်ယခုအားယူနိုင်သည် ဒီ link ကနေတဆင့် download လုပ်ပါ အမှု၌သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်.
» Transitions DJ ကို Mac App Store မှအခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Transitions DJ၊ Mac အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအယ်ဒီတာနှင့်သင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သော DJs အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု
nahuel prieto ဟုသူကပြောသည်
ငါ butooo မလေးစားချင်ကြဘူး
nahuel prieto အားပြန်ပြောပါ
iPod Touch ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ယခုတိုင်အောင်ဖြစ်သကဲ့သို့
Johny Srouji, Mac Pro နှင့်အခြားအရာများရှိနေသည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး